morainy teo am-piterahana fa tsy araka ny tebiteby nahazo ireo fianakaviana sy ny mpitsabo nandritra ny fitondrany vohoka. Teo amin’ny faharoa ambin’ny folo taonany izy no niteraka ny zanany lahy kely izay indray andro sy indray alina no nihetsi-jaza nefa nony tonga ny fotoam-piterahany dia tsy nanano sarotra izany. Mintatara sady nisento lalina ny reniny niteraka an’io ankizy bevohoka tsy ampy taona io. «Nitebiteby andro aman’alina tamin’ny fotoana nitondran’io zanako vavy io vohoka. Ny dokotera izay nandray azy sy nampisafo azy nandritra azy bohoka aza tsy sahy nampiteraka azy fa nanome taratasy hiakarana hopitaly lehibe. Tsy araka ny tahotra aman-tebiteby anefa ny zava-nisy fa morainy izy raha niteraka. Fony izy nitondra vohoka dia mbola milalao miaraka amin’ny ankizy namany amin’ny mahazaza azy. Saingy na izany aza niasa hatrany izy, indrindra ny fiandraketana ny fanasana lamba ka mety izay tanjany ara-batana izay no nanampy azy. Nezahanay nomena ireo sakafon’ny ny vehivavy bevohoka izy, sady natanjahana hatrany ny môraliny mba hitraka. Salama tsara ilay ankizy niteraka sy ilay zaza lahy izay efa mandray faharoa taona amin’izao fotoana izao”, hoy Raveloarisoa beben’i Tsiory, raha nitantara ny fitondrana vohoka an’ity farany i Brenda Angela reniny. Ny olona tokoa no harena, mahatsiaro sambatra ireto fianakaviana kely ireto amin’izao fotoana izao ary hadinony ny henatra teo amin’ny fiarahamonina sy ny asa saina izay nianjady tamin’izany. Ny hamoahana izao vaovao izao tsy sanatria hanomezana vahana ny fiterahana tsy ampy taona fa hanajana ny maha olombelona raha sendra tranga tsy ampoizina toy izany.